Amazfit GTS 2e uye GTR 2e - $ 115 Smartwatch | TeraNews.net
Amazfit GTS 2e uye GTR 2e - smartwatches ye $ 115
Munyori Kravetz Pavel Yakabudiswa pa 28.12.2020
Kambani yekuChinese Huami yakazivisa zviri pamutemo kutanga kwekutengesa kwema smart watches eAmazfit GTS 2e uye GTR 2e akateedzana. Mutengo wemagadheti i $ 115 muChina. Tichifunga nezvekuwanda kwekushanda uye kutaridzika kutaridzika, mutengo unodhura kwazvo.
Amazfit GTS 2e uye GTR 2e - smartwatches
AMOLED skrini, kurova kwemoyo uye kutarisa kurara, kuona kweropa oxygen saturation. Zvakaoma kufungidzira smartwatch isina mashandiro akadaro. Asi zvigadzirwa zvitsva zvine tekinoroji nyowani - kuona kwekushisa Iyo yakavakirwa-mukati thermometer inoshuviwa nevazhinji vashandisi Amazfit GTS 2e uye GTR 2e ine GPS inogamuchira uye module yeWi-Fi. Iko kune kudzivirirwa pakunyudzwa kwenguva pfupi mumvura (5 ATM). Kuzvimiririra kweAmazfit GTS 2e - mazuva gumi nemana, Amazfit GTR 14e - mazuva makumi maviri nemana.
Kuwedzera kune anodikanwa mabasa, smartwatches anotaridzika chaizvo. Kunyangwe inodhura. Stylish muviri wesimbi uye iri nyore kutsiva tambo inowedzera kuwedzeredza kune Amazfit gadget. Nekugadzira, iyo GTR 2e ine yakatenderedzwa kesi (yakafanana newachi Amazfit GTR 2)uye GTS 2e yakaenzana.
Huawei Tarisa 3 uye Tarisa GT 3 kuvimbisa super smartwatches
Velomobile Twike 5 - kumhanyisa kusvika kumakiromita mazana maviri paawa
Chipo chakanakisa cheicho bhasikoro - WEST BIKING
Pulse Oximeter uye Moyo Rate Rate C101H1
Xiaomi mi band 2 - wongororo mushure memakore matatu ekushandisa
Kupwanya nhau dzevatambi - Rage 2 iri kupa pachena
Yakanyanya kudhura uye yepamusoro mhando smartphone
Sony A7R IV: kukurumidza kutarisa kweiyo yakazara-chimiro chisina girazi
Cyberpunk 2077 - chii mutambo uyu - zvakapfupika
Inexputer yedhipatimendi pabasa